EU inofumura Dhijitari Green Chitupa chevashanyi vakabaiwa jekiseni re COVID-19
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau dzeEurope » EU inofumura Dhijitari Green Chitupa chevashanyi vakabaiwa jekiseni re COVID-19
Belgium Breaking News • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Health News • Kodzero Dzevanhu • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Akasiyana Nhau
European Commission yakasimbisa kuti zvitupa ndezvenguva pfupi uye zvichamiswa kana denda re COVID-19 rapera
EU Dhijitari Green Chitupa chakarongerwa COVID-19 majekiseni
Dhijitari Green Chitupa inotarisirwa kuunzwa mukati meEU pakati paJune
COVID-19 pfuti haizove yekumanikidza kutenderera kwenyika muEU
Vakuru veEuropean Union vaburitsa pachena iyo Dhijitari Green Chitupa pfungwa iyo yakagadzirirwa kushanda seuchapupu hwekubaiwa nhomba kupikisa COVID-19. Iyo Dhijitari Green Chitupa inotarisirwa kuunzwa mukati meEU pakati paJune.
The European Commission yakaburitsa chirevo chinotevera muBrussels:
“Nhasi, Komisheni yatora chikumbiro chemutemo chekumisikidza hwaro hwakaenzana hwechitupa cheDhijitari Green chinobaya kubaiwa majekiseni ekudzivirira, kuongorora uye kupora. Iyi ndiyo nzira yeEU level yekupa, kuongorora uye kubvuma zvitupa kuti zviitise kufamba kwakasununguka mukati meEU, zvichibva pakuremekedza kwakasimba kusasarura uye nekodzero dzakakosha dzevagari veEU. Sisitimu yehunyanzvi inotsanangurwa padanho reEU, kuiswa munzvimbo pakati paJune, kuve nechokwadi chekuchengetedza, kusabatana, pamwe nekuteerera kuzere nedziviriro yedata rako pachako. "Izvi zvinobvumidzawo mukana wekuwedzera zvitupa zvinoenderana zvinopihwa munyika dzechitatu."
Commissioner for Justice, Didier Reynders akasimbisa kuti zvitupa ndezvenguva pfupi uye zvichamiswa kana denda re COVID-19 rapera.
Sekureva kweEuropean Commission, pfuti yeCOVID-19 haizove yekumanikidza kufamba kune dzimwe nyika muEU.
Kuunzwa kwechitupa chekubatira ndiro danho rekutanga rekugadzira iro gwaro. “Paramende yeEuropean pamwe neKanzuru vanofanirwa kumhanyisa hurukuro, kusvika chibvumirano pachisungo cheDigital Green Chitupa, uye vobvumirana nzira yekuvhura yakachengeteka zvichibva pahurongwa hwakasimba hwesainzi. European Commission ichaenderera mberi nekutsigira kuwanda kwemajekiseni, uye kutsvaga nzira dzehunyanzvi dzekuwedzera kusabatana kwehurongwa hwenyika kuchinjana dhata. Nhengo dzeMatunhu dzinofanira kukurumidza zvirongwa zvekudzivirira, kuona kuti zvirambidzo zvenguva pfupi zvakaenzana uye zvisina rusarura, zvinongedzera nzvimbo dzekubatana kuti dzibatsirane pakuongorora kwemvura yakasviba uye nekuzivisa nezvekuedza kwakaitwa, uye nekutanga kuiswa kwehunyanzvi kweDigital Green Chitupa tichitarisa kugamuchirwa kwakakurumidza-kutorwa. yezvawakumbira, ”rakaburitswa nhau.
"Muna Chikumi 2021, pakukumbirwa neEuropean Council, European Commission ichaburitsa pepa rezvidzidzo zvakadzidziswa kubva kudenda uye nzira yakanangana neramangwana rakasimba," Commission yakapedzisa.